Dadka ku waxyeelloobey fatahaadda Webiga Shabeelle oo Gargaar Ka Helay Turkiga iyo Qadar [SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
Dadka ku waxyeelloobey fatahaadda Webiga Shabeelle oo Gargaar Ka Helay Turkiga iyo Qadar [SAWIRRO]
Beledweyne – Dowladaha Turkiga iyo Qadar ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay Dadkii ku waxyeelloobay fatahaaddii uu Webiga Shabeelle ka sameeyay Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya. Waxaana waftiga deeqda waday hoggaaminayay kusimaha raiisul Wasaaraha dalka ahna raiisul Wasaare kuxigeen Mahadi Maxamed Guulleed (Qadar).
Deeqda la gaarsiiyay Baladweyne waxay isugu jirtey Lix nooc oo Raashin ah , waxaana ka faa’iideystay Shan Kun oo Qoys (5 Kun), waxa kaloo halkaasi la gaarsiiyey Saddex Kun oo Bacaha Roobka laga galo ah, iyadoo loo sameeyay Boqol Musqulood, Hay’adaha Hay’adaha Qatar Charity, Bisha Cas ee Turkiga iyo hay’adda TIKA, ayaa sidoo kale halkaas ka billaabeen Biyo dhaamin, si Dadka u helaanBbiyo nadiif ah.
kusimaha raiisul wasaaraha Soomaaliya ayaa deeqdaasi guddoonsiiyay madaxweynaha Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare,iyadoo xubnaha wafdigaasi ay kamid ahaayeen Danjiraayasha Dowladaha Qatar iyo Turkiga, Xildhibaanno iyo Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda gargaarka, waxayna dhamaantood sheegeen inay aad uga damqadeen dhibaatada baaxadda leh ee ay Fatahaaddu geysatay.
Dhinaca kale, Masuuliyiinta Dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnayd ayaa intii howshan ku gudo jireen waxay Lagac gaaraysa Boqol Kun oo Doollar (100,000$) guddoonsiiyeen Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, taasoo ka timid maamulka Gobalka Banaadir.
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa uga mahadceliyay dowladda Federaalka Soomaaliya,dowladaha Qadar iyo Turkiga gargaarka ay soo gaarsiiyeen iyo isgarabtaaga dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeele.